जुन 3, 2019 + खाद्य र पेय, हिस्पानिक, मुख्य मार्ग, मेक्सिकन, मेक्सिको, व्यञ्जनहरु
Chorizo ​​Stuffed Poblano Peppers Recipe
हामीले हिस्पैनिकको बारेमा प्रेम गर्यौं, वा वास्तवमा कुनै पनि डिश, गर्मी हो। त्यहाँ वास्तवमा फाइटी मीट, स्वादिष्ट चीज, र केहि चीज जसले तपाईंलाई पसीने बनाउनेछ भन्दा राम्रो संयोजन छैन! हामी घरमा भरि वा बेक्ड मिर्चमा धेरै भिन्न भिन्नताहरू गर्छौं, अधिक थोरै संस्करणहरू जस्तै ह्याम्बर्गर-भरिएको घण्टी मिर्चले यस्तो भोजमा, जुन निश्चित छन् ... थप पढ्नुहोस्
जुलाई 17, 2018 + मध्य अमेरिका, खाद्य र पेय, मुख्य मार्ग, मेक्सिकन, मेक्सिको, उत्तर अमेरिका, व्यञ्जनहरु
सजिलो चिकन Enchilada नुस्खा
Enchiladas प्राय: एक तरिका मा सोचेका छन् - सामान्यतया बीफ-संग-गहिरो-लाल-सस कन्कोशन जुन स्वीकार्य स्वादिष्ट हुन्छ। तथापि, हामीले फेला पारेको, दक्षिण अमेरिकाको भ्रमणमा, कहिलेकाहीँ चोरी वा सुँगुर बस बाम एन्सिलादास रूपमा उपलब्ध हुन सम्भव थियो! त्यो जस्तो भनिएको छ, यो नुस्खा हाम्रो सजिलो मिक्स हो जुन घरको सजिलो चिकन ईन्चिलदास को एक सजिलो-अप-प्रतिकृति मार्गमा दोहोरो! छाप्नुहोस् ... थप पढ्नुहोस्